တရုတ် 960 × 960 သံရေစိုခံကက်ဘိနက်စက်ရုံနှင့်ထုတ်လုပ်သူများ | Ruichen
၉၆၀ × ၉၆၀ ပြင်ပအားကစားကွင်း
640 × 480-B အလူမီနီယံသေတ္တာ
576 × 576-B အလူမီနီယံသေတ္တာ
၅၇၆ × ၅၇၆-အလူမီနီယံသေတ္တာတစ်လုံး
640 × 640-B အလူမီနီယံသေတ္တာ
၉၆၀ × ၉၆၀ သံရေစိုခံဗီရို
1. အရွယ်အစား: 960*960mm*120mm
2. မော်ဒယ်အရွယ်အစား: 320*160mm 192*192mm
3. အလေးချိန်: 18Kg
4.Color: အနက်ရောင်၊ အပြာရောင်
၅။ တပ်ဆင်ခြင်းနည်းလမ်း - ပုံသေတပ်ဆင်ခြင်း
6.Use Environment: ပြင်ပ
၇။ ဆက်စပ်ပစ္စည်း: မြန်သောသော့၊ လက်ကိုင်၊ ပါဝါပြား၊ လက်ခံပန်းကန်၊ ပန်းကန်ပြားများ
မူလနေရာ ရှန်ကျန်း၊ ကွမ်တုံ၊ တရုတ်
မော်ဒယ်အရွယ်အစား ၉၆၀*၉၆၀*၁၄၅ မီလီမီတာ
Brand Name ပါ RUICHEN
Tube Chip အရောင် အရောင်အပြည့်
ပြသမှု Function ဗွီဒီယို
Pixels များ P10mm/P 5mm/P 6.67mm/P8mm
Module အရွယ်အစား ၃၂၀*၁၆၀ မီလီမီတာ၊ ၁၉၂*၁၉၂ မီလီမီတာ
အရောင် အနက်၊ အပြာ၊ မီးခိုးရောင်၊ အဖြူ
အောင်လက်မှတ် ISO9001, CE
LED display ရေစိုခံကက်ဘိနက်
ပါဝါထောက်ပံ့ရေးပန်းကန်၊ လက်ခံရရှိသောကတ်ပြား၊ နေရာ pin၊ connector plate
၁။ သစ်သားကိစ္စ၊ သစ်သားကိစ္စသည်မျက်နှာပြင်ကိုရွေ့လျားနည်းသောကြောင့်အများအားဖြင့်တည်နေရာ၌အမြဲတမ်းပြင်ပေးသည်။ သစ်သားထုပ်ပိုးထုပ်ပိုးမှုသည်စျေးသက်သာသည်။ ၀ ယ်သူများသည်သစ်သားအ ၀ တ်များကိုသူတို့ဘာသာသူတို့ပေးချေရန်လိုသည်
၂။ Pallet: Pallets များအားသမားရိုးကျအရွယ်အစားရှိသောဗီဒိုအချို့ကိုထုပ်ပိုးရန်အဓိကအသုံးပြုသည်၊ ၎င်းသည်အထုပ်၏အခမဲ့အားသွင်းနည်းလမ်းဖြစ်သည်။
၂။ လေကြောင်းဖြင့်ပို့ဆောင်ခြင်းလေကြောင်းပို့ဆောင်ရေးသည်၎င်း၏လျင်မြန်မှု၊ လုံခြုံစိတ်ချရမှု၊ အချိန်တိကျမှုနှင့်အလွန်မြင့်မားသောစွမ်းဆောင်ရည်တို့ဖြင့်စျေး ၀ င်ကိုသိသိသာသာရရှိခဲ့ပြီး၊ ၀ င်ငွေလည်ပတ်မှုနှင့်လည်ပတ်မှုကိုအရှိန်မြှင့်ရန်ထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေးထောက်ပံ့ရေးကွင်းဆက်ကိုများစွာမြှင့်တင်ခဲ့သည်။
၃။ ဖော်ပြခြင်းအားဖြင့် TNT/UPS/DHL/FEDEX၊ ၎င်းသည်ပိုအဆင်ပြေပြီးမြန်ဆန်သည်၊ ၎င်းကိုအဓိကအားဖြင့်သေးငယ်သောပမာဏနှင့်ပေါ့ပါးသောကုန်စည်များသယ်ယူပို့ဆောင်ရာတွင်အဓိကအသုံးပြုသည်။
သင်္ဘောဆိပ်ကမ်း: shenzhen /guangzhou /tianjin ဆိပ်ကမ်း
သင်္ဘောသက်တမ်း: EXW သက်တမ်း၊ FOB သက်တမ်း၊ CIF သက်တမ်း
ငွေပေးချေမှုအမျိုးအစားများ: T/T လွှဲပြောင်းခြင်း၊ Weston ပြည်ထောင်စု
နောက်တစ်ခု: ၉၆၀ × ၉၆၀ အဆင့်မြင့်သံရေစိုခံသေတ္တာ
Outdoor ရေစိုခံ Led Cabinet
ရေစိုခံ Led Cabinet
ရေစိုခံ Outdoor Cabinet
အပြင်ဘက် Single side front service ရေစိုခံ c ...
အပြင်ဘက်နှစ်ထပ်ခြမ်း ၀ န်ဆောင်မှုရေစိုခံ ca ...
၉၆၀ × ၉၆၀ အဆင့်မြင့်သံရေစိုခံသေတ္တာ
အမှတ် ၄၄ Kengwei လမ်း၊ Baoan ခရိုင်၊ Shenzhen မြို့၊ တရုတ်